အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်စပွန်ဆာမှကြိုဆိုပါတယ် | Martech Zone
ဤသည်မှာစိန်ခေါ်မှုရှိသောလနှင့် Martech အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလကဘလော့ဂ်တွင် ၂၃၃ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်မှုနှင့်အတူစက်တင်ဘာလတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပိတ်ပစ်ခဲ့ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ထိတွေ့မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Zoomerang နည်းပညာပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့်အတူ (ထိုသူတို့အဘို့အသွားရောက်ကြည့်ရှု အွန်လိုင်းစစ်တမ်းအကြံပြုချက်များDelivra ကိုအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပံ့ပိုးသူအဖြစ်ကြေငြာရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။
ဒေလီဗာသည်ပထမဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများ နှင့်မကြာသေးမီက Inc ကို 5000 မှအမည်ရှိခဲ့သည်! ကြီးထွားလာသောစီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာများတည်ဆောက်ခြင်းတို့တွင် Delivra ၏ ၀ င်ငွေကောင်းကောင်းရနိုင်ခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
ဤသည် Delivra နှင့်နှစ် ဦး စလုံးများအတွက်မယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ် Martech Zone။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Delivra သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထူးခြားသောနာမည်ရှိသည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များကိုဂရုစိုက်သည် အမြဲတမ်းမှန်တယ်။ Delivra တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ကြွေးမြီမရှိသော၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့်လုပ်ကိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း အနောက်တောင်ဘက်၏အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိပြီးထိုတန်ဖိုးများ၏တန်ဖိုးမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် ရိုးသားမှု, သစ္စာရှိမှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု အဖွဲ့အစည်းစိမ်။ သူတို့မှာရန်လိုစိတ်ပြင်းထန်တဲ့အရောင်းအ ၀ ယ်သမားတွေမရှိကြဘူး။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဂရုစိုက်ပြီးသင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးကျော်လွန်အောင်ဂရုစိုက်တဲ့ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ပဲ။
လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပတ်စဉ်သတင်းလွှာ (အထက်တွင်စာရင်းသွင်းပါ) ကိုဒယ်လီဗားသို့ကူးပြောင်းပြီးကမ္ဘာသို့ဖြန့်ချိမည့်သူတို့နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုအချို့ပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Delivra ဘလော့ဂါများတွင်လက်တွေ့ကျသောအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြံဥာဏ်များနှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များပါလာမည်။
အကယ်၍ သင်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူစပွန်ဆာပေးလိုပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်လမ်းကြောင်းအချို့ရှိသည်။ analytics, CRM, အီးကုန်သွယ်ရေး, မိုဘိုင်းစျေးကွက်, လူမှုမီဒီယာ, အကြောင်းအရာစျေးကွက်နှင့် WordPress စပွန်ဆာများပွင့်လင်းကြသည်!
3:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 47
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Marketing Tech မိသားစုတွင်ပါ ၀ င်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားပါသည်။
3:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 52
ဟေး! ငါမင်းကိုသိတယ် know
4:2011 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 14
Delivra မှာရှိဂရိတ်အုပ်စု! သငျသညျ Doug သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြသည်ကိုကြည့်ဖို့ဝမ်းမြောက်။ အဆုံးရလဒ်များကိုတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်နေသည်…